Praiminisitra Ntsay Christian: « Tsy sarimihetsika ny fikasana hifofo ny ain’ny Filoha » | NewsMada
Niresaka ny fiainam-pirenena sy ny fitohizan’ny hamehana ara-pahasalamana ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly. Nisongadina tamin’izany ny momba ny fikasan’ny sasany hamono ny filoham-pirenena.
“Tena misy io fikasana io. Tsy mendrika antsika intsony izany teti-dratsin’ny olom-bitsy izany. Famonoana ny firenena ny tahaka izany. Tsy sarimihetsika iny… Resaka aina ary antambo sy loza izany fikasana hamono ny filoha izany”, hoy izy. Notsiahiviny fa efa miroso ny fanadihadiana ary nisy ny fisamborana ireo ahina ho voasaringotra. Anatin’ny famotorana amin’izao fotoana ny tompon’andraikitra ka inoana fa hamoaka ny marina ny fitsarana, araka ny nambarany…
Momba ny mahavoasaringotra ny talen’ny orinasa iray misehatra amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany kosa, nambarany fa mila olona raha hanao izany fikasana hifofo aina izany. “Jerena ireo azo anatanteraka izany miaraka amin’ny vola satria tsy mora ny mifofo ny ain’ny filoham-pirenena. Tafiditra ao anatin’izany io orinasa io. Ny fanadiadiana no ahalalana na mitombina izany na tsia”, hoy ihany izy. Nanipy teny ny praiminisitra fa tokony handanjalanja ny resaka ny rehetra na eo aza ny tsy fitovian-kevitra. Tsy mahasoa ny firenena ny famonoana ny maha iray ny Malagasy…
Ho tonga amin’ny talata ny vaksiny Johnson & Johnson
Mametraka fitokisana amin’ny mpanao famotorana sy ny fitsarana ny fanjakana, araka ny nambarany hatrany. “Aleo hitondra ny porofo avokoa izy ireo sy hampahafatratra ny vaovao rehetra manodidina izany… Miandry ny tena marina ny vahoaka tamin’iny tranga iny…”, hoy izy.
Etsy andaniny, natsidiny sahady fa ho tonga ny talata izao ny vaksiny fanefitry ny Covid-19, Johnson & Johnson. Ho avy ny fiandohan’ny volana aogositra kosa ny daozy fanampiny ho tohin’ny andiany faharoa amin’ilay vaksiny Covishlied. “Ho voahaja ireo fe-potoana ireo”, hoy izy.
Tsy miova ireo fepetra ho an’ny 15 andro manaraka
Nambarany koa fa hitohy ny hamehana ara-pahasalamana ato anatin’ny 15 andro manaraka. “Tokony hohajaina hatrany ny fepetra iadiana amin’ny Covid-19, indrindra mananontanona ny variant Delta”, hoy izy. Araka izany, mbola misokatra ny CTC 19. Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 400 ho an’Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano sy Avaradrano sy Atsimondrano. Miaraka amin’Ambohidratrimo sy Antsirabe I ary Fianarantsoa.
Voarara koa ny fivoahan’ny razana matin’ny Covid-19. Tanterahina ny androtry ny fahafatesany ilay olona raha lavon’ny Covid-19 ary tsy mihoatra ny 10 ireo mpandevina.
Mbola tsy azo atao koa ny famadihana. Manan-kery hatrany tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina manomboka amin’ny 12 alina hatramin’ny 4 ora maraina. Mbola mikatona ny toeram-pandihizana amin’ireo distrika enina voalaza eo ambony ireo. Tsy azo atao koa ny mikarakara lanonana ankalamanjana amin’ireo toerana ireo hatrany raha efa afaka manao izany kosa ny faritra ivelany.
“Tompon-teny farany ny Filoha”
Mbola mikatona ny sidina avy any ivelany ankoatra ireo sokajin’olona mahazo alalana voafaritry ny filankevitry ny minisitra. Manohy ny sidina anatiny kosa ny Tsaradia, ialohavan’ny fitiliana.
Eo amin’ny fitantanana sy ny governemanta kosa, tompon-teny farany amin’ny fanovana na tsia izany ny filoham-pirenena, araka ny nambarany. “Miandry am-pitoniana isika ka hajaina izany. Mandray andraikitra ny filoha rehefa tonga ny fotoana”, hoy izy. Na izany aza, nambarany fa betsaka ireo raharaha tantanina. Anisan’izany ny fiainam-bahoaka andavanandro, ny any atsimon’ny Nosy, ny fampandrosoana ny firenena…